Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: October 2008
လေဘေးသင့် မိဘမဲ့ ကလေးများနဲ့ မှီခိုရာမဲ့ အမျိုးသမီးများအတွက် UNHCR စိုးရိမ်
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရပြီး ၆ လအကြာမှာ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း မိဘမဲ့ ကလေးတွေနဲ့
မှီခိုမဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အများအပြား ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး အကူအညီ အထောက်အပံ့တွေ
ဆက်ပြီး ပေးနိုင်ရေးအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၂၀၀,၀၀၀ အကူအညီ လိုအပ်နေ
တဲ့အကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR က ပြောပါ
တယ်။ လိုအပ်တဲ့အကူအညီကို ဆက်ပြီးမပေးနိုင်ရင် ဘေးဒုက္ခရောက်ရသူတွေ အိုးမဲ့
အိမ်မဲ့ဘ၀ ထပ်ပြီးရောက်မှာ စိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို
ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ လ၊
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ လူ ၂၀၀,၀၀၀ လောက်ကို ကူညီ
စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း UNHCR က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ခြင်ထောင်တွေ၊ ပလတ်စတစ် အမိုးအကာတွေနဲ့ အခြား လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို
ထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ၆ လအတွင်း လပွတ္တာမြို့နယ်အတွင်း မုန်တိုင်းဘေးသင့်ပြည်သူ
တွေရဲ့ လိုအပ်ချက် ၉၃% ကို UNHCR က ဖြည့်ဆီးပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဘိုကလေးဘက်က
မိသားစု ၈၇% ရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း
ဒါပေမယ့်လည်း အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေ အများအပြား ရှိနေဆဲပဲလို့ UNHCR
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်၊ ဒေသဆိုင်ရာရုံး ပြန်ကြားရေးအရာရှိ ကစ်တီ မက်ကင်းဆေး
(Kitty McKinsey) က အခုလို ပြောပါတယ်။
"ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းမှာ အမျိုးသားတွေ အသက်ဆုံးရှုံးသွားပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ မှီခိုမဲ့ အမျိုး
သမီးတွေ၊ မိဘမဲ့ကလေးတွေ အများအပြား ရှိနေဆဲပါ။ သူတို့ကို ဆက်ပြီး ကူညီ
ထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက် အခြေအနေ စိုးရိမ်နေရပါတယ်။ အရေအတွက်အားဖြင့်
ဘယ်လောက်ရှိမယ်လို့ တိတိကျကျ စစ်တမ်းကောက်လို့ မရသေးပေမယ့် ဒီလို ကျန်ခဲ့
တဲ့ ဒုက္ခရာက်နေတဲ့သူတွေအတွက် ရေရှည်ကူနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်" ဆိုပြီး UNHCR
မိသားစုဖူလုံရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ အထောက်အပံ့တွေ ဆက်ပြီး မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်
ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယ်တွေ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဘ၀ ထပ်ပြီး ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
မတရားသဖြင့် အလုပ်ခံရတာတွေ၊ အဓမ္မအလုပ်ကြမ်း ခိုင်းစေခံရတာတွေနဲ့
ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် အသက်မွေးရတဲ့ ဘ၀မျိုးတွေ ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီး ကစ်တီ
မက်ကင်းဆေးက ပြောပါတယ်။ မုန်တိုင်းဘေးကယ်ဆယ်ရေး အခက်အခဲနဲ့ ပတ်သက်
"ဒီလို အကူအညီပေးရေးမှာ အဓိက အခက်အခဲကတော့ လိုအပ်နေတဲ့ အမေရိကန်
ဒေါ်လာ ၁,၂၀၀,၀၀၀ အကူအညီတွေ မရတဲ့ ပြဿနာပါ။ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရပြီး
၆ လအကြာမှာ လူတွေက ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း မုန်တိုင်းဘေးကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်း
တွေကို သိပ်ဂရုမစိုက်တော့တာ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ဒေါ်လာ ၁,၂၀၀,၀၀၀ ဆိုတာ
ဒီနေ့ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရဲ့ အကြွေးဆုံးတွေကို ပြန်ဝယ်ဖို့ ငွေတွေ ဒေါ်လာ
ထရီလီယံနဲ့ချီ သုံးနေတဲ့အချိန်မှာ မပြောပါလောက်ပါဘူး" လို့လည်း UNHCR ထိုင်းနိုင်ငံ
ဘန်ကောက်၊ ဒေသဆိုင်ရာရုံး ပြန်ကြားရေးအရာရှိ ကစ်တီ မက်ကင်းဆေးက ပြောပါ
မုန်တိုင်းဒဏ် ထိခိုက်ခဲ့ပြီး ၆ လအကြာမှာ ပြည်ပနိုင်ငံတွေက အကူအညီပေးရေး ကိစ္စ
တွေကို သိပ်ပြီး အာရုံမစိုက်ကြတော့ဘူးလို့ UNHCR အရာရှိတွေက ပြောကြတဲ့တချိန်
တည်းမှာ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူတွေ
ကလည်း ပြည်တွင်းအလှူရှင်တွေ လျော့နည်းသွားတဲ့အကြောင်းကို မကြာခဏ ပြောဆို
ကြပါတယ်။ အဓိကတော့ လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးမှာ ရေရှည်ပေးမယ့် အကူအညီ
မရှိတာလို့ မအူပင်မြို့ခံ လေဘေးကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ကိုင်နေသူတယောက်က ပြောပါ
"အလှူပေးတဲ့အဖွဲ့တွေက ဆက်ပေးတာ မရှိပါဘူး။ ဒီ ကျနော်တို့ မြို့ထဲ ရွာထဲတွေမှာ
ကျနော်တို့ သာမန်ဘုရားပွဲလို၊ ဒီဘက်တွေမှာဆိုရင် ဘာရှိမလဲဆိုတော့ တန်ဆောင်တိုင်
ပွဲမှာ စတုဒီသာ ကြွေးတာမျိုးတွေ ဒါလောက်ပဲရှိတော့တယ်။ အခုနပြောသလို ကျောင်း
အတွက် ပျက်ဆီးသွားတာကို ပြန်ပြီးကူညီဖို့ ရေရှည်ပေးတာတွေတော့ မရှိတော့ဘူး။
တခုတော့ရှိတာပေါ့၊ နီးစပ်တဲ့ အလှူရှင်ရှိရင် ဒီက ရွာသားတယောက် အခြားနေရာမှာ
သွားပြီး ကြီးပွားနေတယ်ဆိုရင် သူက ပြန်လာမယ်၊ အကူအညီပေးမယ်၊ ဒီလိုပေးတာ
မျိုးလောက်ပဲ ရှိတယ်။ သေချာ အစီအစဉ်ချ ကူညီတာ မရှိတော့ဘူး။"
မအူပင်မြို့ခံ လေဘေးကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ကိုင်နေသူတယောက် ပြောပြသွားတာပါ။
မုန်တိုင်းသင့်ပြီး ၆ လအကြာ လူတွေ အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့၊ ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့
ကြိုးစားကြတဲ့ အခြေအနေကိုလည်း ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း လေးဘေးကယ်ဆယ်ရေး
လုပ်ကိုင်နေသူက အခုလို ပြောပါတယ်။
"ဒီဘက်မှာ မိုးရွာတယ်၊ လေတိုက်တယ်၊ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုတွေကို အမိုးအကာတွေ
ပြန်တပ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်။ အိမ်တွေ တဲတွေ ပြန်ပြီး ဆောက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့။
စိုက်ပျိုးရေးကိစ္စတွေမှာတော့ လယ်တွေတော်တော်များများ ပြန်မစိုက်နိုင်တာတွေ
ရှိတယ်။ ဥပမာ မျိုးစပါးတွေ ပျက်ဆီးသွားတာမျိုး၊ ကျွဲနွားလည်း ထိခိုက်သွားတာတွေ
ရှိတာပေါ့။ တချို့ ကျနော်သိသလောက် လယ်တွေရဲ့ ၂၅% လောက် မစိုက်နိုင်ကြဘူး။
"အခု ဒီဘက်မှာတော့ ကျနော်တို့ နွေစပါးစိုက်ဖို့ တောင်သူတွေ ပြန်ကြိုးစားနေကြ
တယ်။ ကျောင်းတွေ ပျက်ဆီးသွားတဲ့အခါ ကျောင်းတွေ၊ ဇရပ်တွေမှာ ကပ်ပြီး စာသင်
ကြတဲ့ အခြေအနေတော့ ရှိတာပေါ့။ ကလေးတွေ အခြေအနေကလည်း အကူအညီ
တော့ လိုနေတာပဲ။ လူတော်တော်များများ လိုအပ်နေတာက ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေး
တင်မကဘူး၊ စားဝတ်နေရေး အတွက်ပါ။ ဒါတွေကို အကူအညီပေးနိုင်ဖို့တော့ လိုအပ်
UNHCR ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးကတော့ လပွတ္တာနဲ့
ဘိုကလေးဘက်မှာ လူ ၁၅,၀၀၀ ကို နေအိမ်တွေ ဆောက်လုပ်ပေးဖို့ အကူအညီလိုအပ်
နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မုန်တိုင်းဘေး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဟာ UNHCR ရဲ့ ပင်မ
တာဝန် မဟုတ်ပေမယ့်လည်း မုန်တိုင်းဘေးကျပြီးပြီးချင်း လေဘေးကယ်ဆယ်ရေး
လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း UNHCR က ပြောပါတယ်။
Posted by yahutha at 3:06 PM0comments
On October 29th 2008, nine leaders of the 88 Generation Students Group were sentenced to6months imprisonment by Northern Rangoon district court.
During the court hearing, Min Ko Naing and other defendants stood up and complained about the lack ofafree and independent judiciary. The presiding judge accused them of interrupting court procedures and charged them under Section 228 of the Penal Code for contempt of court. He handed downasix-month sentence for nine student leaders - Min Ko Naing, Ko Ko Gyi, Mya Aye, Pyone Cho (aka) Htay Win Aung, Aung Thu, Htay Kywe, Nyan Lin, Myo Aung Naing, and Hla Myo Naung. The remaining defendants in court stood up and demanded that the judge sentence them too. The judge ordered security forces to remove the defendants from the court and adjourned the trial.
“Trials for political prisoners are grossly unfair,” said Ko Tate, secretary of the Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). “Judges and law officers are not operating independently of the ruling State Peace and Development Council. In this case 88 Generation leaders have been harshly punished simply for calling for their right toafree and fair trial to be respected.”
1. Min Ko Naing (Paw Oo Tun) was arrested on 22 August 2007 and charged with the section 5/96(4), 505/b, 33/a, 17/20, 17/1, 32/b/36, 24/1, 130/b, 6.
2. Ko Ko Gyi was arrested on 22 August 2007 and charged with the section 5/96(4), 505/b, 33/a, 17/20, 17/1, 32/b/36, 24/1, 130/b, 6.
3. Mya Aye (Thu Ya) was arrested on 22 August 2007 and charged with the section 5/96(4), 505/b, 33/a, 17/20, 17/1, 32/b/36, 24/1, 130/b, 6.
4. Pyone Cho (Htay Win Aung) was arrested on 22 August 2007 and charged with the section 5/96(4), 505/b, 33/a, 17/20, 17/1, 32/b/36, 24/1, 130/b, 6.
5. Aung Thu was arrested on 13 October 2007 and charged with the section 5/96(4), 505/b, 33/a, 17/20, 17/1, 32/b/36, 24/1, 130/b, 6.
6. Htay Kywe was arrested on 13 October 2007 and charged with the section 5/96(4), 505/b, 33/a, 17/20, 17/1, 32/b/36, 24/1, 130/b, 6.
7. Nyan Lin was arrested on 21 August 2007 and charged with the section 5/96(4), 505/b, 33/a, 17/20, 17/1, 32/b/36, 24/1, 130/b, 6.
8. Myo Aung Naing (Aung Naing) was arrested on 23 October 2007 and charged with the section 5/96(4), 505/b, 33/a, 17/20, 17/1, 32/b/36, 24/1, 130/b, 6.
9. Hla Myo Naung was arrested on 10 October 2007 and charged with the section 5/96(4), 505/b, 33/a, 17/20, 17/1, 32/b/36, 24/1, 130/b, 6.
Ko Tate Naing on +66-(0)81-2878751
Ko Bo Kyi on +66-(0) 81-3248935
Posted by yahutha at 2:18 AM0comments
Report - UploadaDocument to Scribd
သမ္မတလောင်းမဲဆွယ်ပွဲ အိုဘားမားနဲ့ ဘီလ်ကလင်တန် ပူးပေါင်းစည်းရုံး
မယ်။ ဒီအချိန်မှာ အရင်သမ္မတဟောင်း
ဘီလ်ကလင်တန် (Bill Clinton) က
တဲ့ ဒီမိုကရက်ပါတီသမ္မတလောင်း ဘရက်ခ်
အိုဘားမား (Barack Obama) နဲ့အတူ
၀ိုင်းပြီး စည်းရုံးမဲဆွယ်ပေးတာကို ပထမဆုံး
ပါတီက သမ္မတလောင်း ဂျွန်မက်ကိန်း
(John McCain) ရော ဒီမိုကရက်သမ္မတ
လောင်း ဘရက်ခ် အိုဘားမားအတွက်ရော
ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရဖို့ အရေးကြီးတဲ့
အဲဒီမှာ သူတို့ ၂ ဦး အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်နေကြတဲ့အကြောင်း ဗွီအိုအေသတင်း
ထောက် ဘရိုင်ယန် ၀က်ဂ်နာ (Brian Wagner) က ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် မိုင်ယာမီမြို့
ကနေ သတင်းပေးပို့ထားတာကို ကိုကျော်အောင်လွင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
သီတင်းပတ်တွေ တော်တော်များများအကြာ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
သမ္မတလောင်း ဘရက်ခ် အိုဘားမားကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အနေနဲ့ သမ္မတလောင်း
ဘီလ်ကလင်တန်က ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲမှာ ဘရက်ခ် အိုဘားမားနဲ့
အတူ စဉ်မြင့်ပေါ်ကို အတူရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
"ဖလောရီဒါပြည်နယ်ဟာ လာမယ့်အင်္ဂါနေ့ညမှာ အိုဘားမားကို ထောက်ခံကြောင်း
ပြသတဲ့ပြည်နယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သေသေချာချာ လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်က သိပ်ကိုအရေး
ကြီးပါတယ်" လို့ သမ္မတဟောင်း ဘီလ်ကလင်တန်က ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ဘရက်ခ် အိုဘားမားဟာ တိုင်းပြည်မှာ အခုအရေးတကြီးဖြစ်နေတဲ့ စီးပွားရေးပြဿနာ
တွေကို ဂျွန်မက်ကိန်းထက်ပိုပြီး ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ သူအဆိုတင်သွင်းထားတဲ့
စွမ်းအင်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကိစ္စတွေဟာလည်း ချီးကျူး
ဘရက်ခ် အိုဘားမားကတော့ တိုင်းပြည်ဟာ လက်ရှိ အိမ်ဖြူတော်က လုပ်ကိုင်နေတဲ့
အစီအစဉ်တွေအတိုင်း မလိုက်နာဘဲ လမ်းခွဲထွက်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"ကျနော်တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်တာကာလလိုမျိုး နောက်ထပ် ၄ နှစ် ထပ်ပြီး
လက်မခံနိုင်တော့ပါဘူး။ အခုချိန်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွေတုန်းကလို ငြိမ်းငြိမ်း
ချမ်းချမ်းနဲ့ ချမ်းချမ်းသာသာ ဖြစ်ရမယ့်အချိန် ရောက်နေပါပြီ။"
ဘရက်ခ် အိုဘားမား ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
အိုဘားမားနဲ့ ဂျွန်မက်ကိန်းတို့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရေးမှာ အဓိကကျတဲ့
ပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့ ဖလော်ရီဒါလိုမျိုးပြည်နယ်တွေက မဲထည့်ကြမယ့်သူတွေအတွက်
အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်မဲဆွယ်ကြရဖို့က အချိန်တပတ်တောင် မရှိတော့ပါဘူး။
ဒီအချိန်မှာ ဘရက်ခ် အိုဘားမားက နာရီဝက်စာကြာတဲ့ သူ့ရဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား နိုင်ငံရေး
ကြော်ငြာ အစီအစဉ်ကို ပြည်သူတွေအကြည့်များတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ရပ်မြင်သံကြားလိုင်း
တော်တော်များများကနေ မနေ့ညနေပိုင်းက တနိုင်ငံလုံးကို ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအတွက် ဒေါ်လာ ၃ သန်းကျော် ကုန်ကျပါတယ်။
"လာမယ့် ၆ ရက်အကြာမှာ အလုပ်ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် စီးပွားရေး၊
အလုပ်အကိုင်သစ်တွေနဲ့ ကြွယ်ဝတဲ့ ရေနံတွေကိုရဖို့ ကျနော်တို့ ရွေးချယ်နိုင်ပါတော့
မယ်။ လူလတ်တန်းစားတွေက စတင်ရမှာပါ။"
နောက်ဆုံး ကောက်ခံရရှိတဲ့ လူထုထောက်ခံမှု သဘောထားတွေအရ အိုဘားမားဟာ
ဂျွန်မက်ကိန်းထက် အနည်းအကျဉ်းပဲ အသာရထားတာပါ။
ဂျွန်မက်ကိန်းအနေနဲ့က သူ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ အတွေ့အကြုံတွေ
ကြောင့် သူ့ကို ပြည်သူအများက မဲပေးကြပြီး အနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ဘရက်ခ် အိုဘားမားက သူရဲ့အရည်အချင်းတချို့ကို အားရလောက်အောင် ထုတ်ပြခဲ့ပါ
တယ်။ ဒါပေမယ့် မေးစရာရှိနေတာက အိုစာမာ ဘင်လာဒင်တို့ အယ်လ်ကိုင်းဒါးတို့လို
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ကမ္ဘာကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ရန်ကနေ အကာအကွယ်
ပေးနိုင်မယ့်သူလား ဆိုတာပါပဲ။ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ကျရင် အမေရိကန်
သမ္မတသစ် ရွေးကောက်ပွဲစပါတော့မယ်။ အချိန် ၅ ရက်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။
Posted by yahutha at 1:56 AM0comments
Posted by yahutha at 1:52 AM0comments
Posted by yahutha at 2:24 AM0comments
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 29 2008 22:54 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ၉ ဦးကို တရားရုံးကို မထီမဲ့မြင် ပြုမှုဖြင့် ယနေ့တွင် ထောင်ဒဏ် ၆ လ အပြစ်ပေးလိုက်သည်။
ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုလှမျိုးနောင်၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုမြအေး၊ ကိုဥာဏ်လင်း၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုအောင်သူ၊ ကိုအောင်နိုင်တို့ကို တရားရုံးအား မထိလေးစားပြုသည်ဆိုကာ တရားလိုအရာရှိ ဦးမြကြိုင်က စွဲဆိုခဲ့ခြင်းအပေါ် တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရကို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်နေခဲ့သော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအဖွဲ့ဝင်များကို အခြားသော အမှုများစွာဖြင့်လည်း စွဲဆိုထားသည်။
Posted by yahutha at 2:21 AM0comments
စစ်မှုထမ်းဟောင်းများသာ ဦးပိုင်တက္ကစီကားများ မောင်းနှင်ခွင့်ရှိ
NEJ/ ၂၉ အောက်တိုဘာ
ရန်ကုန်တွင် ပါရမီအမည်ရှိ တက္ကစီကားများကို စစ်မှုထမ်းဟောင်းများသာ မောင်းနှင်ခွင့်ရရှိသည်။
မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင် လက်အောက်ခံ ဗန္ဓုလသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်က ဂျပန်မှ တင်သွင်းသည့် ရန်ကုန်အတွက် ပါရမီအမည်ရှိ တက္ကစီများ မောင်းနှင်ခွင့်ကို စစ်မှုထမ်းဟောင်းများသာ ရရှိကြောင်း အဆိုပါကုမ္ပဏီမှ ၀န်ထမ်းတဦးကပြောသည်။
ဂျပန်မှ မှာယူထားသည့် Toyota Mark II ယာဉ်စီးရေ (၁၀၀) ကို ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလမှ စတင်ပြေးဆွဲနေခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကားများ ပြေးဆွဲရန်အတွက် ဗန္ဓုလသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီက ယာဉ်မောင်းများ ခေါ်ယူရန် လျှောက်လွှာပေါင်း (၃) သောင်းကျော် ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အနက် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများကို ဦးစားပေးရွေးကြောင်း၊ စပေါ်ငွေ (၃) သိန်းတင်ရကာ တနေ့ အုံနာကြေး (၁) သောင်းပေးဆောင်ရကြောင်း၊ နံနက် (၆) နာရီမှ ည (၆) နာရီထိဖြစ်ပြီး နေ့လည် (၁၂) နာရီ အ၀င်ပြရကြောင်း၊ ကားကို ကားမောင်းသူကိုယ်တိုင် ကွန်ပျူတာစနစ်သုံး လုံခြုံရေး လက်ဗွေနှိပ်ပြီးမှ ထုတ်ယူခွင့်ရရှိကြောင်း လျှောက်ထားသူ ယာဉ်မောင်းများက ပြောသည်။
“ဦးပိုင်ဆိုတာက စစ်အစိုးရရဲ့လူတွေနဲ့ ဖွဲ့ ထားတာပဲ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေပဲ ရမှာပေါ့၊ စစ်တပ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအ၀န်းတွေ ကောင်းစားနေချိန်ပဲ၊ သူတို့ အသိုင်းအ၀ိုင်း ကောင်းစားဖို့ ဒီကားတွေကို စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကို ပေးတာပေါ့။ စည်းရုံးထားတာလည်း ပါတယ်” ဟု မ ထ သ ယာဉ်မောင်းတဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တွင် ယခုအခါ ပါရမီတက္ကစီ စီးရေ (၂၃၄) စီး ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ဗန္ဓုလသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး မှ တရားဝင်စားရင်းများအရ သိရသည်။
ပါရမီတက္ကစီများကို မောင်းချင်သူများကြကြောင်း၊ အကြောင်းမှာ စပေါ်နည်းပြီး ပြင်ဆင်စားရိတ် မရှိသည့်အတွက် ရသည့်ငွေမှာ အသားတင်ဖြစ်သည့်အပြင် လမ်းတွင် မီးနီဖြတ်မိခြင်း၊ လမ်းကြောမှားခြင်းတို့မှအစ ယာဉ်ထိန်းရဲနှင့် ရှင်းပါက ပါရမီမို့ အဆင်ပြေကြောင်း၊ အပြင်ကားများမှာမူ စပေါ်တင်ပါက (၁၀) သိန်း ၀န်းကျင်ပေးရပြီး ပြင်ဆင်စားရိတ်များလည်း ကိုယ်တိုင်ကြခံကြကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကားမောင်းသူများက ယာဉ်အသစ်ဖြစ်သည့် ပါရမီယာဉ်များကို ကြိုက်နှစ်ကြကြောင်း တက္ကစီသမားများက ပြောသည်။
ပါရမီယာဉ်မောင်းတဦးက “ကျနော် တနေ့ကို (၂) သောင်းခွဲကတော့ ရတယ်၊ တခါတခါ (၃) သောင်းထိရဖူးတယ်၊ အုံနာကြေး (၁) သောင်းဆိုတော့ ပါရမီယာဉ်မောင်းတာ ကိုက်တယ်” ဟု ပြောသည်။
Posted by yahutha at 2:14 AM0comments
ရန်ကုန်ရှိ ထောက်လှမ်းရေးပိုင် တိုက်ခန်းများ လေလံတင်ရောင်းချ
NEJ/ ၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈
နိုင်ငံပိုင်အဖြစ်သိမ်းဆည်းထားသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟောင်းခင်ညွှန့်နှင့် ၄င်း၏အဆက်အနွှယ်များ ပိုင်ဆိုင်သည့် တိုက်ခန်းများ အပါအ၀င် တိုက်ခန်း (၅၀)ကျော်ကို စစ်အစိုးရက ဈေးပြိုင်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချလျက်ရှိ ကြောင်း မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (အိုးအိမ်) သတင်းရပ်ကွက်မှ သိရသည်။
မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံပိုင်သိမ်းဆည်းထားသောပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီက တိုက်ခန်းများကို ပြန်ရောင်းချနေခြင်းဖြစ်ပြီး ရောင်းချသည့် တိုက်ခန်း(၅၂)ခန်း အနက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟောင်း ခင်ညွှန့်ပိုင် တိုက်ခန်း (၁)ခန်း၊ ၎င်း၏သား ရဲနိုင်ဝင်း၏တိုက်ခန်း (၁)ခန်း၊ ၎င်း၏ ကိုယ်ရေး အရာရှိ နိုင်ဌေး၏ တိုက်ခန်း (၁၃) ခန်းနှင့် ၎င်း၏သားမက်ပိုင် တိုက်ခန်း(၆)ခန်းတို့ပါဝင်သည်ဟု အိုးအိမ်ဌာနနှင့် နီးစပ် သူတဦးကပြောသည်။
တိုက်ခန်းဝယ်ယူလိုသူတို့အနေဖြင့် ရန်ကုန်ရှိ အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနသို့ အောက်တိုဘာလ (၃၁) ရက်နေ့နောက်ဆုံး ထား၍ တင်ဒါတင်သွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်ရရှိထားသူတို့အနေဖြင့် တိုက်ခန်းတန်ဖိုးအပြင် အခွန်ငွေ (၁၅) ရာခိုင်နှုန်းကိုပါ တပါတည်း ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး တိုက်ခန်းလွှဲပြောင်းလက်ခံခြင်းနှင့် လူနေ ထိုင် ခွင့်ကိစ္စကို သက်ဆိုင်ရာက ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အိုးအိမ်ဌာနက ကြေညာထားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညွှန့်ကို ၂၀၀၄ အောက်တိုဘာ (၁၉)ရက်တွင် နအဖ စစ်အစိုးရက ကျန်းမာရေး အ ကြောင်း ပြချက်ဖြင့် ၀န်ကြီးချုပ် တာဝန်မှအနားပေးလိုက်ပြီး ၂၀၀၅ ဇူလိုင်တွင် အဂတိလိုက်စားမှု အပါအ၀င် စွဲချ က် (၈)ခုဖြင့် တရားစွဲဆိုကာ ဆိုင်းငံ့ ထောင်ဒဏ် (၄၄)နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်း၏အဂတိလိုက် စားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူများသိရှိရန် ယခုအချိန်အထိ စစ်အစိုးရက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးချေ။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညွှန့် နှင့်ဆက်နွှယ်သည့် ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်(၃၀၀)ကျော်ကိုလည်း စီးပွားရေး မသမာမှု၊ လာဘ်စားမှုများဖြင့် ထိုစဉ်က ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပြီး အချို့ကို ထောင်ဒဏ်နှစ် (၁၀၀) ကျော် အထိချ မှတ်ခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ လာဘ်စားမှုများကို အများပြည်သူသိအောင် စစ်အစိုးရမှ ထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနက သိမ်းဆည်းထားသောတိုက်ခန်းများအား ပြန်ရောင်းချနေသည့်နည်းတူ ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကလည်း နိုင်ငံပိုင်အဖြစ် သိမ်းဆည်းထားသော ကားအစီး (၁၀၀) ကျော်ကို တောင်ငူမြို့၌ လေလံတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး ရန်ကုန်၌လည်း ထပ်မံရောင်းချရန်စီစဉ်နေကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ http://www.newskhitpyaing.co.cc/?p=791
Posted by yahutha at 2:10 AM0comments
Jamar's Grandfather - UploadaDocument to Scribd
Posted by yahutha at 1:54 AM0comments
myayallzar - UploadaDocument to Scribd
Posted by yahutha at 1:50 AM0comments
“စစ်အာဏာရှင် ကြီးစိုးမှုမှောင်ရိပ်” အစီရင်ခံစာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်....
သတင်း အေးလဲ့ ဧရာဝတီ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျား၊မ ကွဲပြားမှုအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ‘စစ်အဏာရှင် ကြီးစိုးမှုမှောင်ရိပ်’ အမည်ရှိ အစီရင်ခံ စာတစောင် ကို ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချူပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) (WLB) က အောက်တိုဘာ ၂၆ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
(Women’s League of Burma)၏ အစီရင်ခံစာတွင် အမျိုးသမီးနှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ နယ်စပ် ဒေသ လူကုန် ကူးမှု တိုးပွားနေမှု၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေး၊ နိုင်ငံ အနှံ့အပြား အမျိုးသမီးများ အပေါ်အကြမ်းဖက်နေမှု စသည့် အဓိကအကြောင်းအရာ ၅ ချက်ကို အခြေခံ ထောက်ပြထားသည်။
ယင်း WLB ၏ အစီရင်ခံစာသည် နအဖ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ်မှ စီဒေါကော်မတီ သို့ပေးပို့ သည့် အစီရင် ခံစာအပေါ် ထောက်ပြဝေဖန်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်းသိရသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရသည် စီဒေါစာချုပ်(CEDAW - အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပပျောက်ရေး သဘောတူ စာချုပ်)ကို ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ ပထမဆုံး အစီရင် ခံစာကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် စီဒေါကော်မတီသို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။ ၎င်းအစီရင်ခံစာကို ၂၂ကြိမ်မြောက် စီဒေါကော်မတီ က သုံးသပ်ခဲ့ကြောင်းလည်း WLB ၏ အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချူပ်ပိုင်း တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ထိုသို့ဖမ်းဆီးခံနေရသူများထဲမှ ၂၄ဦးကိုမူ ရွှေလီရှိ လူမှောင်ခိုကူးမှုတားဆီးရေးအဖွဲ့သို့ တရုတ် အာဏာပိုင် များက ပို့ဆောင် ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရသည်။
Posted by yahutha at 3:51 PM0comments
Posted by yahutha at 3:21 PM0comments
အမေရိကန်ရဲ့ မြန်မာကျောက်မျက်ပိတ်ဆို့မှု ယခင်ဒဏ်ခတ်မှုများထက် ထိရောက်ဟု လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ သုံးသပ်
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ကျူးလွန်နေတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် အမေရိကန်
ပြည်ထောင်စုက အရေးယူ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ ပိုမိုလုပ်ဆောင်လာတဲ့အပေါ်
ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၀၈။
တိုးတက်လာစေဖို့ ဆောင်ရွက်ချက်အဖြစ်နဲ့အခုလို တုံ့ပြန်ချက်တွေ ထွက်ပေါ်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ Human Rights Watch အဖွဲ့ရဲ့
သဘောထားနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ကိုအောင်လွင်ဦး က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဥပဒေအသစ်တရပ်ကို အမေရိကန်အစိုးရက ပြဋ္ဌာန်းထားတာ စတင်အသက်ဝင်လာခဲ့
တဲ့နောက် မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ကျူးလွန်နေတာတွေကို
တားမြစ်နိုင်ဖို့ အဟန့်အတားတခု ဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်ဆိုပြီး လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ
တွေက ကြိုဆိုလိုက်ကြတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံထွက် ကျောက်မျက်တွေကို တင်သွင်းခွင့်မပြု
တားမြစ်ထားတဲ့ အရင်တုန်းက ဥပဒေမှာ တတိယနိုင်ငံတွေကတဆင့် တင်သွင်းတာ
တွေကို တားမြစ်ထားတာမျိုးမရှိဘဲ ဖြစ်နေရာက အခုတော့ အဲဒီလစ်ဟာချက်ကို
ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့ ဥပဒေအသစ်တရပ်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာ
ဒီလို လစ်ဟာချက်တွေကို ပိတ်ပင်နိုင်လိုက်တာကြောင့် ဒါဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်
အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ဟန့်တားရာမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို စောင့်ကြည့်
လေ့လာနေတဲ့ Human Rights Watch အဖွဲ့ကြီးက စီးပွားရေးနဲ့ လူ့အခွင့်ရေးရာ
ဒါရိုက်တာ အာဗင် ဂနေဆန် (Arvind Ganesan) က ပြောပါတယ်။
"ဒါဟာ အရေးကြီးတဲ့ ခြေလှမ်းတရပ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာ့
ကျောက်မျက်တွေဟာ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယလို နိုင်ငံတွေကတဆင့် အမေရိကန်နိုင်ငံထဲကို
၀င်လာနေတဲ့ ယိုပေါက်ဟာပေါက်တွေ ဖြစ်နေတာ ကြာလှပြီဖြစ်တာမို့ အခုတော့ ဒါကို
ပိတ်လိုက်နိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်နေလို့လည်း စစ်အစိုးရအနေနဲ့ အမေရိကန်
မှာ ကျောက်မျက်တွေ ရောင်းလို့ရတာကနေ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ရာထောင်ချီ ၀င်ငွေရ
နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ ဒီယိုပေါက်တွေကို ပိတ်လိုက်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရအနေ
နဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို ဖိနှိပ်နိုင်ဖို့အတွက် ၀င်ငွေရဖို့ ခက်ခဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ ဒီအရင်တုန်းကတည်းက မှတ်တမ်းတွေ လုပ်လာတဲ့နေရာမှာ
မြန်မာနိုင်ငံက ကျောက်မျက်လေလံပွဲတွေဟာ အစိုးရက လုပ်တဲ့ပွဲတွေဖြစ်တာ တွေ့ရပါ
တယ်။ လေလံပွဲဘုတ်အဖွဲ့ဟာဆိုရင်လည်း အစိုးရကိုယ်တိုင်က ထိန်းချုပ်ထားတာပါ။
ဒါကြောင့်လည်း ကျောက်မျက်လေလံပွဲတွေက ရလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို အဓိက
အကျိုးခံစားခွင့် ရနေသူတွေဟာလည်း စစ်အစိုးရပဲ ဖြစ်ပါတယ်။"
ဒီလို ဖိအားပေးမှုတွေ နိုင်ငံတကာ အတိုင်းအတာနဲ့ တိုးမြှင့်လာတာဟာဆိုရင် မြန်မာ
စစ်အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ဟန့်တားစေနိုင်မှာဖြစ်သလို နိုင်ငံရေး
အပြောင်းအလဲတွေအတွက်လည်း တတပ်တအား ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး
"ဒီလို နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးအရ ဖိအားပေးမှုတွေ တိုးပြီးလုပ်လာမယ်ဆိုရင် မြန်မာ
စစ်အစိုးရအနေနဲ့ အရင်လို စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးကို လက်ခံကြတော့မှာ မဟုတ်
ဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ဒါဟာလည်း
ကျောက်မျက်နဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လို ထုတ်ကုန်တွေကရတဲ့ အများပြည်သူပိုင်တဲ့ငွေတွေ
ကို ဘယ်လို သုံးစွဲနေသလဲဆိုတာ သိဖို့အတွက်လည်း လမ်းပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း ဖိအားတွေ တိုးပြီးပေးတာဟာ ဒီမိုကရေစီရေး အပြောင်းအလဲတွေ
ဖြစ်စေဖို့အတွက်လည်း အရေးပါလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။"
လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Human Rights Watch အဖွဲ့ကြီးက စီးပွားရေးနဲ့
လူ့အခွင့်ရေးရာ ဒါရိုက်တာ အာဗင် ဂနေဆန် ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာ သံဃာတော်တွေဦးဆောင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို မြန်မာ
အာဏာပိုင်တွေက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့နောက် ဒီလို မြန်မာကျောက်မျက်တွေကို
သပိတ်မှောက်တာ အပါအ၀င် စစ်အစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးမှုတွေလည်း အရှိန်မြင့်လာခဲ့
တာပါ။ အခု အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အသစ်ပြဋ္ဌာန်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဒီဥပဒေကို
ဒီမိုကရေစီရေး စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ကွယ်လွန်သူ အောက်လွှတ်တော်အမတ်
တွမ်လန်းတို့စ် (Tom Lantos) ကို အစွဲပြုပြီးတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ကျောက်စိမ်းဥပဒေ
ဆိုပြီး အမည်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by yahutha at 2:54 AM0comments
မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြောက်ကိုရီးယားကို ၂၅ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးသွားရောက်
မြန်မာနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ၂ နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေးတွေ ပြန်စပြီးလို့ တနှစ်ကျော်
အကြာ ဒီကနေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း ခေါင်းဆောင်တဲ့
အဖွဲ့ဟာ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော် ပြုံယမ်းကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပတ်ခ် အူအီ ချွန်း (Pak Ui Chun) နဲ့ တွေ့ဆုံ
ခဲ့တဲ့အကြောင်း မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ အစိုးရသတင်းအေဂျင်စီရဲ့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြ
မြို့တော်ပြုံယမ်းလေဆိပ်မှာ မြန်မာအဖွဲ့နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေး
၀န်ကြီးနဲ့ တခြားအရာရှိတွေ တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်းကဆိုပေမယ့် တခြား
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် သံတမန်အဆက်အသွယ် ဖြတ်ထားကြတဲ့ မြန်မာနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား
အကြား လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်ခွဲလောက်ကစပြီး သံတမန်ဆက်ဆံရေး ပြန်လုပ်ဖို့ နှစ်ဖက် သဘော
တူညီခဲ့ကြပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၃ ခုနှစ်က မြန်မာပြည်ကို အလည်အပတ်ရောက်လာတဲ့
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ချန်ဒူးဝမ် (Chun Doo-hwan) ကို မြောက်ကိုရီးယားဘက်က ဗုံးခွဲပြီး
လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာဘက်က သံတမန်အဆက်အသွယ်
ဖြတ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီလုပ်ကြံမှုမှာ တောင်ကိုရီးယားအစိုးရ၀န်ကြီး ၄ ဦး အပါအ၀င် လူ ၂၀ ကျော်
သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ အခု မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းနဲ့အဖွဲ့ဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်
အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မြောက်ကိုရီးယားကို ရောက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by yahutha at 2:35 AM0comments
အဖြူရောင်ဘောင်ခတ်ထားသော သံဃာ မှာ သံမဏိသံဃာအာဇာနည် သံလွင် (ခေါ်)သက်ဦးဝင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by yahutha at 4:03 PM0comments
Burmese Artist Wathone's His works and His Funeral Service
Posted by yahutha at 3:58 PM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ရှေ့ကားလမ်း အတားအဆီးများ ဖယ်ရှား
ဒေါ်စုအိမ်ရှေ့မှ အတားအဆီးများ (မေလ၊ ၂၇ရက် ၂၀၀၆)။ အေပီ။
NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ရှိရာ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းမပေါ်မှာ ချထားတဲ့ အတားအဆီးတွေကို ဒီနေ့ မှာ အာဏာပိုင်တွေက ဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်၊ ဘာအကြောင်းကြောင့် ဖယ်ရှား လိုက်သလဲ ဆိုတာ မသိရသေးပေမဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ Barbed wire တွေနဲ့တားထားတာတွေမရှိတော့ဘူး ဆိုတာကို NLD သတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးညဏ်ဝင်းက VOA ကို ခုလို ပြောပြပါတယ်၊
“မိတ်ဆွေ တယောက်က ပြောလို့ ခြံအရှေ့တော့ မရောက်ပါဘူး။ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းက ကြည့်တော့ လုံခြုံရေးချထားတဲ့ ၀ါယာတွေ ခါတိုင်းထား ထားတာတွေ မတွေ့ဘူး။ မနက်ကတည်းက အခုထိတော့ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးထူးခြားခြား မကြားဘူးခင်ဗျ။”
NLD သတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးညဏ်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခြံရှေ့ မှာ အရပ်ဝတ်နဲ့အစောင့် တွေကတော့ရှိနေဆဲပဲလို့ သိရပါတယ်၊ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်း နှစ်ဘက်လုံးမှာ မနက် ၆ နာရီကနေ ညနေ ၆ နာရီအထိ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပြီလို့သက်ဆိုင်ရာကိုမေးခဲ့ သူက VOA ကို ပြန်ပြီး ပြောပြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အာဏာပိုင်တွေက နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ချ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ အချိန်စုစုပေါင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့
သောကြာနေ့အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့ မှာ ၁၃ နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေ ကမ္ဘာတ၀န်းက မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားနေကြသူတွေလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်း အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် ဆိုပြီး စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အခုအချိန်အထိ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အပေါ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဥပဒေကြောင်းအရ စိန်ခေါ်ဖို့ သူမရဲ့ ရှေ့နေနဲ့အတူ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နှစ်ရှည်လများ ဆက်ပြီး ဖမ်းဆီးထားတဲ့ အပေါ် တရားရုံးမှာ အယူခံတင်ထားတဲ့ ကိစ္စအတွက် ကြားနာမဲ့ ရက်ကိုတော့ခုချိန်ထိမရသေးဘူးလို့ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောပါတယ်ရှင်။
Posted by yahutha at 2:28 AM0comments
Posted by yahutha at 2:26 AM0comments
Burma - UploadaDocument to Scribd
Posted by yahutha at 3:49 PM0comments
ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းစစ်ရေးရေးမှူး တိုမာ့တ်စ် အိုဟေး ကင်တားနား
Posted by yahutha at 12:27 PM0comments
ပီတာအောင်/ ၂၄ အောက်တိုဘာ
နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က သံဃာတော်များကို အကာအကွယ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သဖြင့် စက်တင်ဘာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး မအောင်မမြင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု စက်တင်ဘာသံဃာအရေးအခင်း၌ သံဃာတပ်ပေါင်းစု ခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး အင်္ဂါနေ့၌ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် တနေရာသို့ ရှောင်တိမ်း ရောက်ရှိလာသည့် အရှင်ဦးဣဿရိယက ခေတ်ပြိုင်သို့ မိန့်ကြားသည်။
Posted by yahutha at 3:14 AM0comments
အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း အလန် ဂရင်းစ်ပန်။
ဂရင်းစ်ပန် (Alan Greenspan) က လတ်တလော
နှစ် ၁၀၀ မှာ တကြိမ်သာကြုံရတဲ့ အကြွေးဆူနာမီ
အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ ဆိုတာနဲ့
Posted by yahutha at 3:09 PM0comments
US and the European Parliament call for Daw Aung San Suu Kyi's release
Daw Aung San Suu Kyi has spentatotal of 13 years in detention
The United States is calling on Burmese military leaders to immediately release Daw Aung San Suu Kyi, who marksatotal of 13 years under house arrest on Friday.
State Department spokesman Robert Wood said inastatement Thursday that Daw Aung San Suu Kyi has endured unlawful detention over the many years and she has remainedasteady beacon of hope and inspiration to those seekingapeaceful, democratic Burma.
And the European Parliament also condemned the continued detention of Daw Aung San Suu Kyi, calling for her immediate release.
The European Parliament urged the Asian and European leaders, meeting in an ASEM summit in Beijing Friday and Saturday, "to jointly appeal to the Myanmar military authorities to release all political prisoners."
Posted by yahutha at 3:02 PM0comments
ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်
ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၀
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
လုပ်ဆောင်ဖို့ စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်း
ကျခံနေရတဲ့ အကျဉ်းသား ၂,၀၀၀ ကျော်ကို လွှတ်ပေးဖို့လည်း မစ္စတာ တိုးမာ့စ် အိုဟေး
ကင်တားနား (Tomas Ojea Quintana) က ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ
တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မစုမြတ်မွန်းက တင်ပြပေးထားပါ
မစ္စတာ တိုးမာ့စ် အိုဟေး ကင်တားနားဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို သြဂုတ်လမှာ ပထမဆုံး
အကြိမ် သွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် စစ်အစိုးရလုပ်ရ
မယ့် အချက် ၄ ချက်ကို အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။
"နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်းတွေနဲ့
ကိုက်ညီအောင် ပြည်တွင်းဥပဒေတွေကို ပြင်ဆင်
ပါ၊ နိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေကြောင့် ဖမ်းဆီးထားသူ
တွေအားလုံးကို လွှတ်ပေးပါ၊ စစ်တပ်ကို ပြုပြင်
ပြောင်းလဲရေးလုပ်ပါ၊ စစ်တပ်မှာ လူ့အခွင့်အရေး
သင်တန်း ပေးပါ၊ လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်နိုင်မှုနဲ့
စက်တင်ဘာလတုန်းက အကျဉ်းသား ၉,၀၀၀
လွှတ်ပေးခဲ့တာကို မစ္စတာကင်တားနားက ကြိုဆို
ပေမယ့် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူ
၇ ယောက်ပဲ ပါတယ်ဆိုတာကို ထောက်ပြပါ
တယ်။ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူပေါင်း ၂,၀၀၀ ကျော်ရှိနေတာကို
လွှတ်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီထဲမှာ အထင်ရှားဆုံးကတော့ အမျိုးသားဒီမို
ကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စတာကင်တားနားဟာ သူ့ရဲ့ ၄ ရက်ကြာ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းမှာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ သူမ အဆောတလျင် လွတ်လာလိမ့်
မယ်လို့လည်း မစ္စတာကင်တားနားက မမျှော်လင့်ပါဘူး။
"လတ်တလောမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်
အရမ်းကြီး မျှော်လင့်မထားပါဘူး။ သူမဟာ မတရား ဖမ်းဆီးခံထားရတာဖြစ်တယ်
ဆိုတာ စစ်အစိုးရ နားလည်လာအောင်လုပ်မယ့် ဗျူဟာတွေကို ကျနော် ကြိုးစားရှာနေ
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ တိုးမာ့စ်
အိုဟေး ကင်တားနား ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူပဲ မြောက်ကိုရီးယားဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်
ဗီတစ် မွန်တာ့ဘွန်း (Vitit Muntarbhorn) ကလည်း မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်
အရေးအခြေအနေ တိုးတက်မှုမရှိဘူးလို့ နယူးယောက်ခ်မြို့က ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာ
Posted by yahutha at 2:41 PM0comments
အေပီ သတင်းထောက် ဒေါ်အေးအေးဝင်း
ဧရာဝတီ | အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈
နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီး မီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းက၂၀၀၈ ခုနှစ် အတွက် ရဲရင့်သော သတင်းသမား ဆုကို မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်အခြေစိုက် အေပီ သတင်းထောက် ဒေါ်အေးအေးဝင်းအား ယနေ့တွင် ပေးအပ်သည်။
နိုင်ငံအတွင်းမှ သတင်းမှန်များကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါး စွန့်စား ရဲရင့်စွာ ရေးသားတင်ပြနေသော ဒေါ်အေးအေးဝင်း က သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သည် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အာမခံချက်တခုပင် ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားလိုက်သည်။
“နိုင်ငံတည်ငြိမ်လွတ်လပ်မှုနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်ဖို့ အတွက် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ဟာ ပဓာန ကျပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ကျမရဲ့ သတင်းထောက် အလုပ်က ပြည်သူကို အလုပ်အကြွေးပြုရာ ရောက်သလို နိုင်ငံ အတွက်လည်း တစုံတရာ အာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်လို့ ကျမ ယုံကြည် ပါတယ်”ဟု လည်း ဒေါ်အေးအေးဝင်းက ဆိုသည်။
အဆိုပါ အသက် ၅၄ နှစ်ရှိ ဒေါ်အေးအေးဝင်းရရှိသည့် ရဲရင့်သော သတင်း သမားဆုကိုမူ အေပီ သတင်းဌာန၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အယ်ဒီတာ ဂျွန် ဒန်းနစ္စဇွက်စ်ကီက ကိုယ်စား လက်ခံရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျွန် ဒန်းနစ္စဇွက်စ်ကီ က“မြန်မာ သတင်းထောက် ဒေါ်အေးအေးဝင်းဟာ ခြိမ်းခြောက် နှိပ်စက်မှုတွေကျင့်သုံးနေတဲ့ အာဏာပိုင်တွေ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကြားက အနှစ်၂၀ နီးပါး သတင်းမှန်တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကြိုးပမ်းထုတ်ဖော် ရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်၊ သူဟာ မာန ထောင်လွှားတတ်သူလည်း မဟုတ်ပါဘူး”ဟု ချီးကျူးပြောကြားသည်။
ယင်းဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို အမေရိကန်နိုင်ငံ မန်ဟက်တန်မြို့လယ်ရှိ Waldorf Astoria hotel တွင်ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပြီး နယူးရောက်မြို့တော်ဝန် မိုက်ကယ် ဘလွမ်းဘာ့ဂ် နှင့် တခြားသော ဂုဏ်ထူးဆောင် ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက် ကြသည်။
“ဒီ သတင်းထောက်အလုပ်ဟာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ စွန့်စားမှုတခုဆိုတာ ဒေါ်အေးအေးဝင်းသိပါတယ်၊ သူ့ယောက်ျားနဲ့ သူ့အဖေ ကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက ထောင်ချခဲ့ဖူးတယ်၊ သူ့ကိုလည်း ဖမ်းဆီးဖို့ ခြိမ်းခြောက်တာတွေ ရှိခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် သူ ဒီအလုပ်ကို နောက်မဆုတ်ခဲ့ဘူး” ဟုလည်း ဂျွန် ဒန်းနစ္စဇွက်စ်ကီက ပြောသည်။
ဂျွန် ဒန်းနစ္စဇွက်စ်ကီက ဒေါ်အေးအေးဝင်းသည် အများပြည်သူ သိသင့်သိထိုက်သည့် သတင်းမှန်များနှင့် ဗဟုသုတ တို့ကို ပြန်လည် ရေးသားတင်ပြသော သတင်းသမားများ၏ အစဉ်အလာကောင်းကို ကိုယ်စားပြုသူ တဦးလည်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
စစ်အစိုးရတရပ်က နှစ်ပေါင်း ၄၀ ခန့် အုပ်စိုးနေသော နိုင်ငံတနိုင်ငံရှိ သတင်းသမားများသည် ကြိုတင်တွက်ဆ မထားနိုင် သော အန္တရာယ်များ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ သတင်းလုပ်ငန်းများတွင် လွတ်လပ်မှုမရှိဘဲ စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စွာ လုပ်ကိုင်ကြရ မှုများ စသည့်ပြဿနာများနှင့်ရင်ဆိုင် ကြရပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်း သတင်းထောက်အလုပ်သည် စွန့်စားမှု တခုပင်ဖြစ်သည်ဟု ဒေါ်အေးအေးဝင်း ပေးပို့လိုက်သော အမှာစကား စာတစောင်ကိုလည်း ဂျွန် ဒန်းနစ္စဇွက်စ်ကီ က အခမ်းအနားတွင် ဖတ်ကြားသည်။
စစ်အစိုးရက သတင်းသမားများစွာကို ဖမ်းဆီး၍ တိကျသေချာသော ပြစ်မှုမဖော်ပြဘဲ ရာဇ၀တ်မှု၊ အသရေ ဖျက်မှု၊ နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှုများဖြင့် တရားစွဲဆိုအရေးယူမှုများရှိကြောင်း၊ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် သတင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သော သူ၏ ဖခင်ကိုယ်တိုင် ထောင် သုံးကြိမ် ကျခဲ့ဖူးကြောင်း ဒေါ်အေးအေးဝင်းက ၎င်း၏ စာတွင် ပြောပြထားသည်။
“ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အထူးသဖြင့် သတင်းအလုပ်နဲ့ ပတ်သက်သူ ဆိုရင် အချိန်မရွေး အကြောင်းပြချက် မယ်မယ်ရရ မရှိဘဲနဲ့ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး ခံရနိုင်ပါတယ်၊ ည သန်းခေါင် ဘယ်အချိန် တံခါး လာခေါက်မလဲ ဆိုတာကို စိုးရိမ် ထိတ်လန့်စွာ နေကြရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်”ဟုလည်း ဒေါ်အေးအေးဝင်း က ထည့်သွင်း ပြောဆိုထားသည်။
နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီး မီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းက၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသမီး ၄ ဦးကို ဆုရွေးချယ်ပေးအပ် ခဲ့ရာ ရဲရင့်သော သတင်းသမားဆုကို ဒေါ်အေးအေးဝင်း အပါအ၀င် အာဖဂန်နစ္စတန်သူ Fraida Nekzad နှင့် ဆိုက်ပရပ်စ် မှ Sevgul Uludag တို့ကိုပေးအပ်ပြီး အေပီ သတင်းဌာနအတွက် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် စစ်သတင်း များနှင့် တခြားသော ကမ္ဘာ့ သတင်းများကိုရေးသားတင်ပြခဲ့ပြီး ယခု ကုလသမဂ္ဂတွင်ရှိသော အေပီ သတင်းဌာန သတင်းထောက်ချုပ် အမေရိကန် အခြေစိုက် Edith Lederer အသက် ၆၅ နှစ် ကိုမူ Lifetime Achievement Award ဆု ပေးအပ်သည်။
Posted by yahutha at 2:22 PM0comments
သြစတေးသျှနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ငွေကြေးအရ အရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှု စာရင်းတိုးချဲ့သတ်မှတ်
မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိုလို့ သြစတေးလျနိုင်ငံက စစ်အစိုးရအပေါ် ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားတာကို တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာငွေကြေး ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားတဲ့ စာရင်းထဲမှာ နောက်ထပ် ၄၅ယောက် ထပ်တိုးလိုက်ကြောင်း သြစတေးလျ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး စတီဖန် စမစ်က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ ထပ်တိုးလိုက်တဲ့ အရေးယူခံ ၄၅ယောက်ထဲမှာ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များ၊ ၀န်ကြီးများ၊ ထင်ရှားတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ မိသားစုဝင်များ ပါဝင်ကြပါတယ်။ ၂၀၀၇ခု အောက်တိုဘာလမှာ သြစတေးလျ အစိုးရက မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဒဏ်ခတ်အရေးယူ လိုက်ချိန်က စပြီး အရေးယူ ခံထားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ၄၆၃ယောက် ရှိနေပြီး၊ မြန်မာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများရဲ့ မိသားစုဝင်များ၊ သူတို့နဲ့ အကျိုးတူ စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်ဖက်များပါဝင်ကြပါတယ်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချခံနေရတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးဖို့ သြစတေးလျ အစိုးရက တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဆင်းရဲ အထီးကျန် ဖြစ်ရတဲ့အတွက်လည်း စစ်အစိုးရ ပြစ်တင်ဝေဖန်ထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀၀ လောက်ကို အကျဉ်းချထားခြင်းက နိုင်ငံရေး အရ တိုးတက်မှု မဖြစ်စေဘူးလို့လည်း သြစတေးလျ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး စမစ်က ထောက်ပြဝေဖန်သွားပါတယ်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချခံနေရတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးဖို့ သြစတေးလျ အစိုးရက တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဆင်းရဲ အထီးကျန် ဖြစ်ရတဲ့အတွက်လည်း စစ်အစိုးရ ပြစ်တင်ဝေဖန်ထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀၀ လောက်ကို အကျဉ်းချထားခြင်းက နိုင်ငံရေး အရ တိုးတက်မှု မဖြစ်စေဘူးလို့လည်း သြစတေးလျ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး စမစ်က ထောက်ပြဝေဖန်သွားပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိုလို့ သြစတေးလျနိုင်ငံက စစ်အစိုးရအပေါ် ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားတာကို တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာငွေကြေး ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားတဲ့ စာရင်းထဲမှာ နောက်ထပ် ၄၅ယောက် ထပ်တိုးလိုက်ကြောင်း သြစတေးလျ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး စတီဖန် စမစ်က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ ထပ်တိုးလိုက်တဲ့ အရေးယူခံ ၄၅ယောက်ထဲမှာ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များ၊ ၀န်ကြီးများ၊ ထင်ရှားတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ မိသားစုဝင်များ ပါဝင်ကြပါတယ်။ ၂၀၀၇ခု အောက်တိုဘာလမှာ သြစတေးလျ အစိုးရက မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဒဏ်ခတ်အရေးယူ လိုက်ချိန်က စပြီး အရေးယူ ခံထားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ၄၆၃ယောက် ရှိနေပြီး၊ မြန်မာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများရဲ့ မိသားစုဝင်များ၊ သူတို့နဲ့ အကျိုးတူ စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်ဖက်များပါဝင်ကြပါတယ်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချခံနေရတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးဖို့ သြစတေးလျ အစိုးရက တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဆင်းရဲ အထီးကျန် ဖြစ်ရတဲ့အတွက်လည်း စစ်အစိုးရ ပြစ်တင်ဝေဖန်ထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀၀ လောက်ကို အကျဉ်းချထားခြင်းက နိုင်ငံရေး အရ တိုးတက်မှု မဖြစ်စေဘူးလို့လည်း သြစတေးလျ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး စမစ်က ထောက်ပြဝေဖန်သွားပါတယ်။ http://www.voanews.com/burmese/
Posted by yahutha at 3:44 PM0comments
လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့နေ ဦးအေးမြင့်အတွက် လူဒိုဗစ်တာရီယေး ဆုအခမ်းအနား ရောမမြို့တွင် ကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့နေဦးအေးမြင့် ကို ဥရောပ ရှေ့နေများ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီက လူဒိုဗစ် တာရီယေးဆု ချီးမြှင့်တဲ့ အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာလ ၂၈ရက်နေ့က အီတလီနိုင်ငံ ရောမ မြို့တော်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပ တလွှားက ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ရှေ့နေကြီးတွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ ဒီအခမ်းအနားမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တရားမျှတမှုမဲ့နေတဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားမှာ ဦးအေးမြင့်ကိုယ်စား ဆုတက်ရောက်ယူမယ့်သူ ဥရောပ မြန်မာနိုင်ငံရုံးက ဦးဘာဒီ ဇော်မင်းက ဒီဆုကို ဥရောပ ရှေ့နေများ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ ဥက္ကဌကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ပြီး ဦးအေးမြင့်ဆီ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း အခုလို ပြောပါတယ်။
“ဒီဆုကို ပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဥက္ကဌကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံကို သွားပြီးတော့ ဦးအေးမြင့်ကို တွေ့ပြီး ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီဆုက တနှစ်တခါ၊ တနိုင်ငံ တနေရာဆီလုပ်တယ်။ ဒီနှစ်က ရောမမြို့မှာ လုပ်တယ်။ အခမ်းအနားနဲ့ သူ့ကို ချီးမြင့်တယ်။ ဥရောပမှာရှိတဲ့ ဥရောပ ရှေ့နေအားလုံးကို ဖိတ်တယ်။ အခမ်းအနားမှာ ဗမာပြည်အကြောင်း ပြောကြတယ်။ ဆုကို ကျွန်တော်က ဦးအေးမြင့် ကိုယ်စား ယူခဲ့ပါတယ်။”
ဒီဆုကို ဘယ်လို ရွေးချယ်ပြီး ပေးသလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးပါ။
“တရားဥပဒေကိစ္စတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွေ လုပ်တယ်။ လယ်သမားတွေ အခွင့်အရေးကိစ္စတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားစေခိုင်းမှုကိစ္စတွေမှာလည်း ILOကို သူက ဦးဆောင်ပြီး တိုင်တန်းပေးတယ်။ ဦးအေးမြင့်ပဲ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာပြည်မှာ တခြား ရှေ့နေတွေ၊ လှုပ်ရှားသူတွေ လုပ်တဲ့အလုပ်ကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ သဘောပေ့ါ။”
အခမ်းအနားမှာ မှတ်မှတ်ရရ ထူးခြားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကြားခဲ့ရသေးလား။
“မြန်မာပြည်မှာ မတရားမှုတွေ ဆက်ပြီး ဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက် ရှေ့ဆက်ပြီး ကူညီသွားဖို့ သူတို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို ဓာတ်ပုံပွဲတို့၊ ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားတို့ လုပ်ပြီး ပြောပြမယ်။ ဥရောပမှာ သုံးလတကြိမ်ထုတ် ဥပဒေ မဂ္ဂဇင်းမှာ မြန်မာပြည်အကြောင်း အမြဲပါအောင် လုပ်တယ်။”
လူဒိုဗစ် တာရီယေးဆု ကို လူ့အခွင့်အရေး ဦးအေးမြင့် ကိုယ်စား လက်ခံပေးခဲ့တာကို ရောမမြို့ကနေ ပြောပြပေးနေတာပါ။ ဒီဆုဟာ လူ့အခွင့်အရေး တိုက်ပွဲဝင် ရှေ့နေတွေကို ချီးမြှင့်တဲ့ ရှေးအကျဆုံး၊ အထူးခြားဆုံး ဆုဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၅ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ပထမဆုံး ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတာကတော့ တောင်အာဖရိက ခေါင်းဆောင်ဟောင်း နယ်ဆင် မန်ဒဲလား ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by yahutha at 3:41 PM0comments
ရန်ကုန်မြို့မြောက်ပိုင်း ဆင်ခြေဖုံးအရပ်မှာ မနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေပိုင်းက ဗုံးတလုံး
ကွဲတာကြောင့် အမျိုးသားတဦး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်
၁၈ ရပ်ကွက်က နေအိမ်တလုံးမှာ ပေါက်ကွဲတာဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူဟာ အသက် ၃၀
အရွယ် အမျိုးသားဖြစ်တယ်လို့ နယ်ခံတွေက ပြောပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို
ကိုသားညွန့်ဦးက ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဗုံးပေါက်ကွဲပြီးပြီးချင်း သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေ၊ လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေက
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေအိမ်ကို ရောက်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းအချို့ကို
ထပ်တွေ့ရတယ်လို့ နယ်ခံတွေအပြောအရ သိရပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်၊ သေဆုံးမှုနဲ့
ပတ်သက်လို့ နယ်ခံတဦးက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
"၃၀ ၀န်းကျင်လောက်ရှိမယ်။ သူက ထမင်းဝယ်ပြီး ပြန်လာတဲ့အချိန် တံခါးဖွင့်လိုက်
တော့ အုံးသွားတာပေါ့၊ အဲဒီမှာ။"
အခု ကျနော်တို့ကြားတာ သူ့အိမ်မှာလည်း ဗုံးတွေထပ်မိတယ်လို့ သတင်းတချို့မှာ
"အဲလိုမျိုးပြောကြတယ်၊ အတုံးတွေတဲ့။ လူကတော့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ပဲ။"
သူ့မိသားစုရော ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိတယ်လို့ ကြားပါလဲ။
"နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်တဲ့။ သူ့အဖေကတော့ ရပ်ရေးရွာရေး ဓမ္မာရုံမှာ တရားတွေ
ဘာတွေ ဟောတာတော့ ရှိတယ်၊ လူကြီးပေါ့။"
အခုပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နေစဉ်မှာ သေဆုံးသူတဦးပဲ နေအိမ်မှာရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ရန်ကုန်တိုင်း ရဲချုပ်ရုံးကို ဗွီအိုအေက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ
မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ပြန်ကြားရေးဌာနအနေနဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာ
ထုတ်ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့ တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိတဦးက အခုလိုဖြေပါတယ်။
"ရဲချုပ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလည်း ဖတ်လိုက်ရမှာပါ။ ရဲချုပ် တရားဝင်သတင်းစာ
ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်တယ်လေ။ အဲဒီ ရဲချုပ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့
က သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဆိုပြီး တာဝန်ပေးထားတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့က စာစောင်
တွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီး အဲဒီသတင်းကို ထုတ်ပြန်ပေးမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် တာဝန်ရှိတဲ့ လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီကိစ္စ
အမြန် သတင်းထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် ကျနော်တို့လည်း
သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအတွက် တာဝန်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ နေပြည်တော်
က တာဝန်ရှိ ရဲမှူးတွေဆီကို ဆက်သွယ်ပေမယ့် တုံ့ပြန်ချက် မရပါဘူး။
စနေနေ့ညကတော့ ရန်ကုန် ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ တပ်မတော်မှတ်တမ်းရုံးအနီးမှာ
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီး အနီးအနားမှာ နောက်ထပ် မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ နောက်ထပ်ဗုံးတလုံး
ကိုလည်း စနက်တံဖြုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဒီကနေ့ အစိုးရသတင်းစာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
တလောတုန်းက ရန်ကုန်-တိုက်ကြီး လိုင်းကားတစီး အင်းစိန် စက်မှုတက္ကသိုလ်အနီး
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာကိုတော့ ဒါဟာ ကားတိုက်မှုကြောင့် ဂက်စ်အိုးပေါက်ကွဲခဲ့တာလို့
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ဗုံးကွဲမှုတွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖြစ်နေတာဟာ
မသမာသူတွေရဲ့ လက်ချက်ဖြစ်တယ်၊ ဒါတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေပါတယ်လို့
အာဏာပိုင်တွေဘက်က ပြောဆိုနေတဲ့ တချိန်တည်းမှာ ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
စွပ်စွဲခံရတတ်တဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဘက်က ဖိနှိပ်မှုတွေ ပိုပြီးတိုးလာမလားဆိုပြီး
ဒီလို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရဲ့ အဖျက်
အမှောင့်လုပ်ရပ်အဖြစ် မြန်မာအစိုးရ အာဏာပိုင်တွေက စွပ်စွဲလေ့ရှိတဲ့အပေါ်မှာလည်း
နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေ၊ အကဲခတ်တွေက သံသယရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Peaceful Walking at 2:16 AM0comments
လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် နိုင်ငံတကာနှင့် မြန်မာ့အရေးကို ဂျပန် ချဉ်းကပ်မည်
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အလှည့်ကျ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် ရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် နိုင်ငံတကာနဲ့၊ အများသဘောတူ ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ့အရေးဟာ နိုင်ငံတကာက စိုးရိမ်ရတဲ့ ကိစ္စတခုဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း ၀န်ခံပြောဆိုပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ကိုသိန်းထိုက်ဦးက တင်ပြထားပါတယ်။
မနေ့က ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အလှည့်ကျ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် ၂ နှစ် သက်တမ်းအတွက် မဲပေးရွေးချယ်တဲ့ အချိန် ဂျပန်နိုင်ငံဟာ အခြား မက်ခ်ဆီကို၊ ယူဂန်ဒါ၊ တူရကီ၊ သြစတြီးယား စတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အတူ အလှည့်ကျ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေ အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
မနေ့က နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်မှာ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ယူကီယို တာကာဆု (Yukio Takasu) က သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အချိန် မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စ သတင်းထောက်တွေရဲ့ အမေးကို အခုလို ပြန်လည် ဖြေကြားသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံ အရေးကိစ္စဟာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေ စိုးရိမ်ရတဲ့ ကိစ္စတခုထဲတင် မဟုတ်ပါဘူး၊ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက စိုးရိမ်ရတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာ အလေးထားရမယ့် ကိစ္စတခုအဖြစ် ချမှတ်ထားပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ဖို့ ဆိုတာ အားလုံး လုပ်ကိုင်ရမယ့် ကိစ္စပါ။ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ ချွင်းချက်နဲ့ ချန်ထားလို့ မရပါဘူး။”
ဒုတိယ အနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကို တိုးတက်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ အရေးယူပိတ်ဆို့ ဖိအားပေးတဲ့ နည်းတွေ က ပိုကောင်းသလား၊ တချိန်တည်းမှာ တိုးတက်လာအောင် လုပ်ဖို့ အကျုိုးခံစားခွင့်တွေ ပေးပြီး နားချတာမျိုး၊ ပိုပြီး တိုးတက်အောင် တွန်းအားပေးတာမျိုးက ထိရောက်သလား၊ ဂျပန်အနေနဲ့နဲ့တော့ မျှတအောင် ချဉ်းကပ်တဲ့ နည်းကို သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အပြုသဘောဆောင်ပြီး နိုင်ငံတကာအကြား အားလုံးလက်ခံတဲ့ တူညီတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုမျိုးနဲ့ ရပ်တည်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ယူကီယို တာကာဆုက ပြောဆိုပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီကို တိုးချဲ့ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် လုံခြုံရေးကောင်စီ အမြဲတမ်း အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဒုတိယ အများဆုံး အလှူရှင်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လုံခြုံရေးကောင်စီ အလှည့်ကျ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပြီးတဲ့နောက် အာရှဒေသတွင်း အာဖဂန်နစ္စတန်အရေး၊ အရှေ့တီမောအရေး၊ မြောက်ကိုရီးယား နျူကလီးယား အစီအစဉ် ဖျက်သိမ်းရေး အရေးကိစ္စတွေကိုလည်း အလေးထား ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံက ပြောဆိုထားပါတယ်။ အာရှဒေသအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ အီရန်နိုင်ငံ ယှဉ်ပြိုင်ရတာ ဖြစ်ပြီး ဂျပန်က ထောက်ခံမဲ ၁၅၈ မဲရရှိပါတယ်။ အီရန်က ထောက်ခံမဲ ၃၀ ကျော်သာရရှိပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကို ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူတွေကရော ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ၊ မြန်မာ့အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (ဂျပန်နိုင်ငံ) ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ် ဂျပန်-မြန်မာ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးတင်ဝင်းကတော့ အခုလို သုံးသပ်ပါတယ်။
“အရေးကြီးဆုံးက ဂျပန်က အီရန်ကို နိုင်တာက ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ထင်တယ်။ အီရန်သာ နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပေါက် သူကတော့ စစ်အစိုးရဘက်က လိုက်မှာပဲ။ ဂျပန်နိုင်တယ် ဆိုတာက ကျနော်တို့အတွက် နံပါတ် (၁) က ပိုပြီး စိတ်သက်သာရာ ရတယ်ပေါ့နော်။ အဲတော့ ဂျပန်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့က ချဉ်းကပ်ရတာ လွယ်တယ်။ နောက်ဆုံး ဂျပန်က ကျနော်တို့ဘက်ကို မပါရင်တောင်မှ ကြားနေနိုင်ငံ အနေအထား ရှိနေတဲ့အတွက် အီရန် မရသွားတာ ကျနော်တို့အတွက် ကံကောင်းတယ်။ သာမန်အားဖြင့်ကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာက စီးပွားရေး အကူအညီပေးမှုနဲ့ပဲ နိုင်ငံတွေအပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးမှု ရအောင်လုပ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ်မှာလည်း သူက ဒီလိုပဲ ဆက်ဆံလာခဲ့တာပေါ့နော်။ အဲတော့ သူတို့ လုပ်နိုင်တာက ဘာလဲ ဆိုတော့ အနောက်နိုင်ငံ နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ နဲ့ သူတို့နဲ့ တူတဲ့ လမ်းကြောင်းဘက်ကနေ သွားပြီးတော့မှ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီး အနောက်နိုင်ငံတွေလို တခါတည်း စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့သည်အထိ မလုပ်သည့် တိုင်အောင် တစုံတရာ အတိုင်းအတာ အထိပေါ့နော် morally ပေါ့ သူတို့ ပြသဖို့ လိုတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ လက်ရှိ အနေအထားပေါ်မှာပေါ့။ အခု လာမယ့် နောက် လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ရှိလာမယ့် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ဂျပန်က ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုဘက်က ရပ်မယ့် အလားအလာ က တော်တော်ကို များတယ်လို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။”
မြန်မာ့အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (ဂျပန်နိုင်ငံ) ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ် ဂျပန်-မြန်မာ မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးတင်ဝင်းရဲ့ သုံးသပ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Peaceful Walking at 3:25 AM0comments
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Somchai Wongsawat ကို ဘန်ကောက်မြို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် တွေ့ရပုံ(အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၈)
Posted by Peaceful Walking at 12:57 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 12:54 PM0comments
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဂွမ်ဒေါင်း ပြည်နယ် အရုပ်စက်ရုံ တခုရှေ့တွင် အလုပ်သမား ရာနဲ့ချီ စုဝေးနေကြပုံ (အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၈)
အနောက်နိုင်ငံက ဈေးကွက်တွေအတွင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံလုပ် ကစားစရာ အရုပ်တွေ တင်သွင်းမှုကို ပိတ်ပင်လိုက် တာကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ အဓိက အရုပ်စက်ရုံကြီး ၂ ခု ပိတ်ပစ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီစက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ အလုပ်သမားဦးရေ ၇,၀၀၀ ကျော်ဟာလည်း အလုပ်လက်မဲ့ဘ၀ကို ရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာကြီးအတွင်းမှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်း ပြဿနာတွေကြားမှာ တရုတ်နိုင်ငံ လုပ် ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေ၊ တရုတ်ပြည်နိုင်ငံထုတ် ကစားစရာ လုပ်ငန်းတွေဟာ အပြင်းအထန် ထိခိုက်နစ်နာ ဆုံးရှုံးနေရတဲ့အကြောင်း ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် ဒန်နီယယ် ရှက်ဖ် (Danial Schearf) က ဘေဂျင်းမြို့ကနေ သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်က ဒေါင်းဂန်းမြို့မှာရှိတဲ့ အစိုးရရုံးကို မနေ့က သောကြာနေ့က အလုပ်လက်မဲ့ဘ၀ကို ရောက်နေကြတဲ့ တရုတ်လူမျိုး အလုပ်သမား ရာပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ကစားစရာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က အပြီးအပိုင် ပိတ်ပစ်လိုက်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ လုပ်ခ လစာ ၂ လစာ အထိကို အဲဒီကုမ္ပဏီက မရှင်းပေးသေးတာကြောင့် အခုလို အစိုးရရုံးရှေ့ကို သူတို့ ရောက်ခဲ့ကြရတာပါ။
အခု ပိတ်ပစ်လိုက်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက အမေရိကန် က ဒက်စ်နဲလ် နဲ့ ဒစ်စနီ တံဆိပ်တွေ ထုတ်ပေးနေတဲ့ ဟောင်ကောင် စာရင်းဝင် စမတ် ယူနီယံ အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ငွေကြေး အကျပ်အတည်းထဲ စီးပွားရေး အခက်တွေ့နေတဲ့ ပို့ကုန် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေကြတဲ့ ကုမ္ပဏီ ထောင်ပေါင်းများစွာထဲက အဲဒီ ကုမ္ပဏီဟာလည်း တခု အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဒေါင်းဂန်းမြို့တော်ဝန် လီယွန်း ကတော့ အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ များလာတာဟာ ဒီနှစ် အစောပိုင်း အဲဒီမြို့က စက်ရုံတွေ ၄၀၀ လောက် ပိတ်ပစ်လိုက်တာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
“မနှစ်ကထက် ဒီနှစ်မှာ နိုင်ငံခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေရဲ့ အမြတ်အစွန်း ရရှိမှု အများကြီး လျော့ကျသွားလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ အရှုံးပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေဟာလည်း ပိုပို များလာနေပါပြီ။ နောက်နှစ်မှာတော့ ပိတ်လိုက်ရတဲ့ စက်ရုံ အရေအတွက် နည်းနည်း ပိုများလာ လိမ့်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။”
အနောက်နိုင်ငံ ဈေးကွက်တွေထဲမှာ တရုတ်နိုင်ငံလုပ် ထုတ်ကုန်တင်သွင်းမှု ၁၃ % ကျော်ကျော်ကို အဲဒီ ဂွမ်ဒေါင်း ပြည်နယ်က တင်ပို့နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် နိုင်ငံခြား တင်ပို့နေတဲ့ ကစားစရာအရုပ် လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေကြတဲ့ ကုမ္ပဏီ တ၀က်ကျော် အခြေစိုက်တာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာကိုပဲ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၃,၆၀၀ ကျော်ဟာ လုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းပြီး ကုမ္ပဏီတွေ ပိတ်ပစ်လိုက်ရတဲ့ အဆင့်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ အခုလို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းတွေထဲ တရုတ်နိုင်ငံက စက်ရုံတွေမှာ အလုပ်သမားတွေရဲ့ လစဉ်လုပ်ခ ကိစ္စ၊ ကုန်ကြမ်းဆိုင်ရာ ကိစ္စနဲ့ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ ဖြစ်လာဖို့ တရုတ်လူမျိုးတို့ တက်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ရုန်းကန် စွမ်းဆောင် ကြရမှာပါ။
ကစားစရာ အရုပ်တွေကို အနောက်ဈေးကွက်တွေမှာ ၀ယ်ယူအားကျလာပြီး ဈေးကွက် ပျက်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၆ သန်း အထိ ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ အဲဒီ စမတ် ယူနီယံ အဖွဲ့က အစောပိုင်းက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု အလုပ်သမားတွေကို မရှင်းပေးရသေးတဲ့ လုပ်ခတွေကို အဲဒီကုမ္ပဏီက ပေးမယ် မပေးမယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။ အဲဒီ ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းက ဘယ်ရောက် နေမှန်းမသိ ပျောက်နေပေမယ့် အဲဒီ ပြည်နယ်က တာဝန်ရှိ အစိုးရ အဖွဲ့တွေကတော့ သောကြာနေ့ကစပြီး အလုပ်သမား တွေကို ရှင်းပေးရမယ့် အလုပ်သမား လစာတွေအတွက် ဒေါ်လာ ၃ သန်းမက ယာ ထားပြီး အလုပ်သမားတွေရဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနေတယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံက ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြရေးသားထားကြပါတယ်။
Posted by Peaceful Walking at 12:48 PM0comments
Posted by Peaceful Walking at 2:22 AM0comments
Generation Wave ( မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး ) မှအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သော ကိုကျော်သူမျိုးမြင့် ( ခ ) အာကာ အားဖမ်ဆီး
Oct 17th Press Release - UploadaDocument to Scribd
Posted by Peaceful Walking at 1:48 AM0comments
ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ပြေလည်ရေး ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ဆက်လက် ကြိုးပမ်းနေ
ကမ္ဘာ တလွှား လတ်တလော ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျယ်အတည်းကို ပူးပေါင်း ဖြေရှင်းရေး နည်းလမ်းရှာဖို့ ဥရောပ က ခေါင်းဆောင်တွေ မနေ့က ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ အကြွေး ၀ယ်ယူတဲ့ စံနစ် ပြိုကျရာက ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး ဈေးကွက်ကြီး တခုလုံးနဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို ထိခိုက်တော့မယ့်အရေး ဖြစ်လာတာကို ဟန့်တား ဖို့ နိုင်ငံပေါင်းစုံက ၀ိုင်းဝန်း ဖြေရှင်းကြဖို့ နောက်ဆုံး ကြိုးစားကြခြင်း ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ၀ါရှင်တန်ကနေ ဗွီအိုအေ သတင်း ထောက် Michael Bowman က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ဥရောပ ခေါင်းဆောင်တွေ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ အခုလိုတွေ့ဆုံနေကြတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းက G –7စက်မှုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံ ၇ နိုင်ငံက ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးတွေ တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်နဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် နဲ့ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့ကလည်း ၀ါရှင်တန်မြို့မှာ ဆက်လက် ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ အဲဒီ စက်မှု ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်တဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲက တိကျခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တစုံတရာ မရခဲ့ပေမယ့် အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဘဏ်တွေကို ကူညီရေး၊ ဒေ၀ါလီခံမယ့် အရေးက ဟန့်တားရေးနဲ့ ငွေချည်းငှားနိုင်မှု ပြန်လည် လည်ပတ်နိုင်ရေး စတဲ့ကိစ္စ တွေမှာ နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကို ကူညီတာတွေ၊ တင်းကျပ်ထားတဲ့ ငွေချည်းငှားတဲ့ စနစ်ကို လျှော့ချပေးတာတွေနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေ စိတ်ချ လက်ချရှိလာအောင် တိုင်းပြည်တော်တော်များ များက ဖိဖိစီးစီး လုပ်ဆောင်လာနေကြပါတယ်။
အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အမေရိကန်ဘဏ်တွေမှာ ဗဟိုအစိုးရက တိုက်ရိုက် ရင်နှီးမြုပ်နှံဖို့ သမ္မတဘုရ်ှအစိုးရ ကလည်း အခု အဆိုပြုလာပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ ပြဿနာတက်နေတဲ့ ဘဏ်တွေကို တနည်းအားဖြင့် အစိုးရက တစိတ်တပိုင်း နိုင်ငံပိုင် လုပ်ပစ်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဥရောပနိုင်ငံ တော်တော် များများမှာလည်း လုပ် ဆောင်ပြီးနေပါပြီ။
ဘဏ်တွေရဲ့ လည်ပတ်မှုစနစ် တောင့်တင်းခိုင်မာလာအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့က အရေးကြီးတယ်လို့ ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီး ဟောင်း Lawrence Summers က ပြောပါတယ်။
Lawrence Summers’ Act: “ အခုပြဿနာမှာ စတော့ဈေးကွက်က အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ ဘဏ်တွေရဲ့ လည်ပတ်မှု စနစ် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာအောင်လုပ်မှရမယ်၊ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာအောင်လည်း မြန်မြန်လုပ်မှရလိမ့်မယ်။ ”
မစ္စတာ ဆမ်းမားက တနင်္ဂနွေနေ့ အေဘီစီ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်မှာ ပြောသွားခဲ့တာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်း စတော့ဈေးကွက်အများစု ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိကျပြီး စံချိန် တင်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတလွားက အစိုးရတွေ စုပေါင်းပြီး ညီညွတ် ခိုင်မာစွာ လုပ်ဆောင်ကြမှသာ စတော့ဈေးတွေ ကျနေတာကို ဟန့်တားနိုင်မယ်လို့ ၀ါရှင် တန်အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးအဖွဲ့က အကြီးအကဲ Fred Bergsten က CBS ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ မေးမြန်းခန်းမှာ ပြောပါတယ်။
Fred Bergsten’s Act: “ ကျနော်တို့က ယုံကြည်မှုနဲတဲ့ ပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာဗျ။ ငွေးကြေးဈေးကွက်က ထိန်းမနိုင်၊ သိမ်းမရတဲ့အခြေအနေလောက်ကို ရောက်နေတယ်။ အစိုးရနဲ့ ဗဟိုဘဏ်က သူတို့တွေ စိတ်အေးရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်။ ငွေချည်းငှားတဲ့ဈေးကွက် ပုံမှန် ပြန်လည်ပတ်နိုင်အောင်၊ ဘဏ်တွေ ငွေပြန်ချည်းနိုင်အောင်၊ စီးပွားစံနစ်ကြီးတခုလုံး ရှေ့ကို ဆက်တက်လှမ်းနိုင်အောင် အစိုးရနဲ့ ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ တိကျ သေချာတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အဆင့်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်ဗျ။ ယုံကြည်မှုတွေ ပြန်ရလာအောင် နောက် တရက်၊ နှစ်ရက်အတွင်း ဆုံးဖြတ်ချက် အမြန်ချမှတ် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုနေပြီ။ ”
သန်းနဲ့ချီတဲ့ အမေရိကန်ပြည်သူတွေ ကိုယ်မတတ်နိုင်တဲ့အကြွေးငွေတွေနဲ့ အိမ်တွေဝယ်ယူနိုင်အောင် ငွေချည်းငှားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက အကျင့်သိက္ခာပျက်စွာ စံညွန်းတွေ လျှော့ချပြီး ချည်းငှားခဲ့ကြရာက အမေရိကန် အိမ်ယာမြေဈေးကွက် ပျက်ပြားပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်ကြီးတခုလုံးကို ထိပါးလာခဲ့တာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတင် ဥရောပ၊ အာရှနဲ့ တခြား ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတော်တော်များများအထိ ဒီဘဏ္ဍာ ရေးဈေးကွက်ဂယက်က ရိုက်ခတ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် အခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေ သိမ်းပိုက်တာ၊ ထောက်ပံ့ကူညီတာ၊ ကြီးမားတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်တွေ ချမှတ်လုပ်ဆောင်တာနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်အောင် ရေတို မှာ လိုအပ်တဲ့ ငွေချည်းငှားရေးစံနစ်ကို လွယ်ကူအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတာတွေကို သမ္မတဘုရ်ှအစိုးရက လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ တယ်။
ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် နိုင်ငံတခုချင်းစီအနေနဲ့ စီမံကိန်း ချမှတ်လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေနဲ့ အစိုးရ အရာရှိတွေအကြား ယုံကြည်နေကြပေမယ့် ဒီအခက်အခဲကြီး တခုလုံးရပ်တန့်ဖို့အတွက်ကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်မှရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by Peaceful Walking at 3:06 PM0comments
ဧရာဝတီ | အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈
ယနေ့ နံနက် ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်က ရန်ကုန်သီရိမင်္ဂလာဈေး - တိုက်ကြီး အဝေးပြေး ဟိုင်းလတ်စ်ကားတစီး ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပြီး လူ ၇ ဦး ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကာ လူ ၁ ဦး အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရရှိသွားသည်။
Posted by Peaceful Walking at 3:03 PM0comments